Песнь Сулаймона 4 CARST - Nnwom Mu Dwom 4 ASCB
1Wo ho yɛ fɛ, me dɔfoɔ!
Wʼaniwa a ɛhyehyɛ wo nkatanimu mu no te sɛ aborɔnoma.
Wo nwi te sɛ mpapokuo a
wɔresiane Gilead Bepɔ.
2Wo se te sɛ nnwankuo a wɔatwitwa wɔn ho nwi foforɔ,
a wɔfiri adwareɛ.
Wɔnam mmienu mmienu
na wɔn mu biara nyɛ ankonam.
3Wʼanofafa te sɛ koogyan ahoma;
Wʼasontorɔ mu a ɛhyɛ wo nkatanimu mu
te sɛ ateaa aduaba fa.
a ne nyinaa yɛ akofoɔ kyɛm.
5Wo nufu mmienu te sɛ atwe mma mmienu,
atwe mma ntafoɔ a
wɔdidi wɔ sukooko mu.
6Ɛnkɔ si sɛ adeɛ bɛkye,
ama sunsum adwane no,
mɛkɔ kurobo bepɔ
ne aduhwam nkokoɔ no so.
7Me dɔfoɔ, wo ho yɛ fɛ papa;
wo ho nni ɛdɛm biara.
8Ma yɛn mfiri Lebanon, mʼayeforɔ,
wo ne me mfiri Lebanon nkɔ.
Siane firi Amana atifi bra,
firi Senir atifi, Hermon apampam hɔ,
firi agyata buo mu
ne mmepɔ a asebɔ dɛɛdɛɛ hɔ.
9Woagye mʼakoma abɔ so, me nuabaa, mʼayeforɔ;
woagye mʼakoma abɔ so
wode wʼani a ɛbɔɔ me soɔ,
ne wo kɔnmuadeɛ mu ɔbohemaa baako.
10Wo dɔ yɛ ahomeka, me nuabaa, mʼayeforɔ!
Hwɛ wo dɔ sɔ ani sene bobesa,
na wʼaduhwam yɛ hwam sene pɛperɛ biara.
11Adɔdɔdeɛ firi wʼano sɛ ɛwokyɛm, mʼayeforɔ;
nufosuo ne ɛwoɔ wɔ wo tɛkrɛma ase.
Wo ntadeɛ mu hwa te sɛ Lebanon deɛ.
12Wote sɛ turo a wɔato ano ɛpono mu, me nuabaa, mʼayeforɔ;
woyɛ asutire a wɔagye ho ban, asubura a wɔasɔ ano.
13Wo nnua yɛ nnuabafuo so ateaa
a ɛso aba pa,
14nnuannua ne mmɛtire,
a ohwamfufuo nnua hodoɔ,
kurobo ne dupapoɔ
ne pɛperɛ papa ahodoɔ nyinaa ka ho.
15Woyɛ turo mu asubura.
Woyɛ ɔtadeɛ a nsuo tene firi mu
sane firi Lebanon.
Bra, anafoɔ fam mframa!4.16 Mframa a ɛbɔ firi atifi fam no mu dwo enti ɛma nnuaba yɛ foforɔ daa. Mframa a ɛbɔ firi anafoɔ fam no mu yɛ hye na ɛma nnuaba no bere. Ne mmienu ka bɔ mu a, ɛma mframa a ɛyɛ hwam fa turo no mu.
sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne hwa no bɛgyegye hɔ.
Ma me dɔfoɔ mmra ne turo mu
ASCB : Nnwom Mu Dwom 4